लायकुको अन्तिम पर्खाल ! - कोसेली - कान्तिपुर समाचार
लायकुको अन्तिम पर्खाल !
दरबार होस् या ढुंगेधारा– त्यस्ता भौतिकी आफ्नो समयका ध्वनि र रङसहित अस्तित्वमा रहन्छन् । खण्डहर नै भए पनि यस्ता अवशेषलाई इतिहासको कसीमा घोटेर हेर्दा तत्कालीन समाजको मोटामोटी स्वरूप नियाल्न सकिन्छ । बनेपा र त्यसवरपरका सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक अध्ययन गर्ने एउटा गतिलो आधार हुन सक्छ– लायकु दरबार ।
भाद्र १२, २०७७ दीपक सापकोटा
काठमाडौँ — ‘अरनिकोले बनेपाको लायकुमा बनाएको नौतले दरबारकै नमुनामा चीनमा पनि एउटा दरबार बनाएका थिए ।’ किंवदन्ती बनेको बनेपाको लायकु, दन्त्यकथाजस्तै बनेका अरनिको ! अनि तिनै अरनिकोले लायकुको नमुनामा चीनमा पनि दरबार बनाएको मिथक–कथा !
म राति निदाउनुअघि जब सिरानीमा टाउको अड्याएर आँखा चिम्लन्थेँ, मेरो कल्पनामा जुँघाको रेखी बस्न थालेको १७ वर्षे कलाकार अरनिको र उसको पछिपछि लागेर हिमालपारिको विस्तीर्ण पठारमा हिँडिरहेका ७९ जना कालीगढहरूको लर्को देखा पर्न थाल्थ्यो । सपनामा पनि ती कलाकारलाई म बेइजिङको विश्वप्रसिद्ध श्वेतप्यागोडा बनाउन आफ्ना कुशल हात चलाइरहेको देख्थेँ । त्यो श्वेतप्यागोडा बनेपाको लायकु दरबारको नमुनामा बनेको थियो कि यो अप्रमाणित किंवदन्ती मात्र हो, त्यो भने अहिलेसम्म पनि अनिर्णीत नै छ ।
म एक महिनादेखि काभ्रेको व्यापारिक केन्द्र र पुरानो बजार बनेपाको आफ्नो घरमा बसेर लकडाउनको फुर्सदिलो समय कटाउने प्रयत्न गरिरहेको छु । र, यो लामो घरबन्दीले मलाई बनेपाकै लामो इतिहासमा घोत्लिन प्रेरित गरिरहेको छ । लायकु दरबारको कथामा वर्णन गरिएका अरनिको हजुरआमाले सुनाएका दन्त्यकथाका राजकुमारजस्तै हुन्थे । स्कुलमा मैले पढ्ने एउटा पुस्तकको ‘राष्ट्रिय विभूति’ शीर्षकको परिच्छेदमा अरनिकोमाथि लेखिएको थियो । स्कुल पढ्दा शिक्षकले अनौपचारिक कक्षामा ‘अनुश्रुतिअनुसार’ भन्दै सुनाएको लायकु दरबारको कथा पनि मेरो स्मृतिको भण्डारबाट बाहिर निस्केको छ र त्यसले मलाई सदियौं पहिलेको विशाल फलकमा पुर्‍याएर छोडिदिएको छ ।
सरले सुनाउनुभएको थियो, ‘हाम्रा कलाकार अरनिकोले चीनमा गएर बनेपाको नौतले दरबारकै नमुनामा त्यहाँ पनि एउटा भव्य दरबार बनाएका थिए ।’ (यहाँ स्मरणीय के छ भने नेपालभाषामा लायकु शब्दको अर्थ दरबार हो तर बनेपाको लायकुलाई नेपालभाषा र नेपाली दुवै नाम एकैसाथ राखेर सम्बोधन गर्ने चलन छ अर्थात् लायकु दरबार) ।
लायकु दरबारको विषयमा धेरै खोजबिन भएको छैन, लेखिएको पनि त्यति धेरै छैन । बनेपा क्षेत्रकै दुई विद्वान् केदारनाथ प्रधान र ज्ञानकाजी मानन्धरले आ–आफ्ना किताबमा लायकुका विषयमा केही खोजबिन भने गरेका छन् ।
इतिहासकार ज्ञानकाजी मानन्धरको किताब ‘बनेपा सातगाउँ’ मा यसरी अर्थ्याइएको छ, ‘लायकु भनेको राजकुल अथवा लालकुल हो । लालकुलबाट लायकु शब्दको व्युत्पत्ति भएको हो । लायकु शब्द मल्लशासनको मध्यकालदेखि चल्दै आएको पाइन्छ (पृष्ठ ६२) ।’
इतिहासकार महेशराज पन्तका अनुसार, संस्कृतको ‘राजकुल’ बाट अपभ्रंश भएर लायकु शब्द निर्माण भयो । राजकुलको अर्थ ‘राजाको दरबार’ हुन्छ ।
आज बनेपाली इतिहासकार प्राध्यापक केदारनाथ प्रधानका ‘नवीन दृष्टिमा नेपालको प्राचीन इतिहास’ (२०५४) र ‘बनेपाको ऐतिहासिक रूपरेखा’ (२०५६) पुस्तकले मेरो लकडाउन–बेलालाई प्राचीन कलाकर्मी र वास्तुकलाको परिवेशमा लगिदिए । संस्कृति–अध्येता सत्यमोहन जोशीको ‘कलाकार अरनिको’ (२०४४) शीर्षकको पुस्तकले अरनिकोले चीनमा बनाएको दरबारबारे भन्छ, बनेपाको लायकु दरबारमाथि स्पष्ट पार्दैन । तर, प्राध्यापक प्रधानले आफ्नो किताब ‘बनेपाको ऐतिहासिक रूपरेखा’ मा बनेपा र अरनिकोसम्बन्धी त्यो सन्दर्भलाई ‘अनुश्रुति’ भनी लेखेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘यहाँ सुनिने एउटा अनुश्रुतिअनुसार अरनिकोले बनेपाको नौतले दरबारको नमुना चीनमा बनाएका थिए । तर, यहाँको दरबारको नमुना बनाइएको हो वा होइन भन्नेबारे थाहा पाइएको छैन (पृष्ठ ६३) ।’ तर, ज्ञानकाजी मानन्धर भन्छन्, ‘मैले यस्तो अनुश्रुति सुनेको छैन । यो श्रुतिलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण पनि छैन ।’
अरनिको (विसं १३००–१३६३, अरनिकोको जन्ममिति किताबहरूमा फरक–फरक लेखिएको छ । यो मिति सत्यमोहन जोशीको किताब ‘कलाकार अरनिको’ अनुसार लेखिएको हो) ले चीनमा पुगेर बनाएका चिनियाँ सम्राट् ‘कुब्ला खाँ’ को पोर्ट्रेटलगायत अरू थुप्रै कलाकृतिका बारेमा विस्तृत वर्णन भेटिन्छ । तर, अरनिकोले बनेपाको प्राचीन ‘९ तल्ले लायकु दरबार’ को दुरुस्त नमुनाका रूपमा चीनमा कुनै संरचना बनाएका थिए भन्ने जुन जनश्रुति हाम्रो समाजमा युगौँदेखि चल्दै आएको छ, यसलाई ‘ओरल हिस्ट्री’ अन्तर्गत अब अभिलेखित गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
इतिहासकार प्रधानको निचोडसँग लायकु दरबारमाथिको मेरो कल्पना केही हदसम्म मिल्छ । प्रधानले लेखेका छन्, ‘लायकु दरबारको बीच भागमा हात्ती बाँध्ने मौलो, पश्चिमतिर स्नान गर्ने पोखरी, पश्चिम–दक्षिण कोणमा दुमाजुदेवीको मन्दिर, दक्षिणमा तल बगैंचा र पोखरी, माथि आवास, पूर्वी भागमा देवी–देवता रहने पूजाखण्ड, पूर्वी–दक्षिण कोणमा नृत्यघर र उत्तरमा प्रशासनिक खण्ड थिए । विसं २००७ मा प्रजातन्त्रको उदयपछि खेलकुद मैदान बनाउँदा दुमाजु मन्दिर र मौलो पुरिएका थिए ।’
प्रधानजस्तै लायकु दरबारमाथि ज्ञानकाजी मानन्धर लेख्छन्, ‘सुरक्षाका लागि ठूलो ढुंगाको पर्खालले घेरेर आठ दिशामा आठ पोखरी, आठ प्रवेशद्वार, आठ पाटी र आठ गणेशको स्थापना गरेर कलिगत वर्ष ४१९७ मा राजा आनन्ददेवले निर्माण गरेको बनेपाको पश्चिमी ढोका पर्ने पर्खालभित्र लायकु दरबारको क्षेत्र छ । पहिले यहाँ सातवटा चोक थिए भन्ने बनेपाका बूढापाकाहरूको भनाइ छ (बनेपा सातगाउँ पृष्ठ ६३) ।’
अरनिकोसँग जोडिएको त्यो जनश्रुति मात्रै थियो कि इतिहासको यथार्थ–कथाकै पुनर्लेखन ? तर, श्रुतिअनुसार नै किन नहोस्, बनेपाको लायकु दरबारसँग अरनिकोको केही सम्बन्ध देखिन्छ ।
ज्ञानकाजी मानन्धरले बनेपाको लायकु दरबार ‘कलिगत वर्ष ४१९७ मा राजा आनन्ददेवले निर्माण गरेको’ लेखेका छन् । यस कलिगत संवत्लाई विक्रम संवत्मा परिवर्तन गर्दा त्यो विसं ११५३ हुन्छ (इतिहासकार महेशराज पन्तको सहयोगमा परिर्वतन गरिएको । पन्तका अनुसार, कलिगत संवत् र विक्रम संवत्मा ३०४४ वर्षको फरक हुन्छ ।) अरनिको र राजा आनन्ददेवको समय एउटै हो त ? आनन्ददेव (विसं १२०३–१२२४ शासनकाल) अरनिको (विसं १३००–१३६३) भन्दा झन्डै १०० वर्षअघि राजा भएका हुन् । (पछिल्ला कालका वंशावलीका आधारमा दिइएको आनन्ददेवको शासन–समय तात्कालिक प्रमाणद्वारा पुष्टि हुँदैन ।)
यस हिसाबले ‘आनन्ददेवले निर्माण गरेको’ बनेपाको लायकु अरनिकोले हेर्न पाएको हुन सक्ने सम्भावनाचाहिँ छ । तर, त्यसैको नमुनामा अरनिकोले चीनमा चैत्य बनाए कि बनाएनन् भन्ने कुरा यकिनका साथ भन्न सकिन्न । जे होस् श्रुतिपरम्पराका कथामा ऐतिहासिक आधार हुनसक्छ । यो थप अनुसन्धानको विषय हो ।
अरनिको जन्मिँदा काठमान्डु उपत्यकामा अभय मल्ल (वि.सं. १२७३–१३१२ शासनकाल) राजा थिए । अरनिको चीन जाँदा भने उपत्यकामा भीमदेव (विसं १३१५–१३२७ शासनकाल) राजा थिए । इतिहासअनुसार, ‘चीनको साक्या गुम्बाका संघनायक पाहसपाले चिनियाँ सम्राट् कुब्ला खाँको आदेशअनुसार नेपालबाट नाम चलेका, विभिन्न सीपमा पोख्त वास्तुविद् र शिल्पकार चीन पठाइदिनू भन्ने निमन्त्रणा विसं १३१७ मा नेपालमा पठाए । त्यसपछि अरनिकोको मातहतमा ७९ जनाको टोली चीनतर्फ गयो (जोशी, पृष्ठ ७) ।’ विसं १३३१ मा चीनमा अरनिको मुख्य हाकिम भएर काम गरिरहँदा अनन्त मल्ल (१३३१–१३६४ शासनकाल) काठमान्डु उपत्यकाका राजा थिए । इतिहासकार पन्तका अनुसार, त्यस बेला काठमान्डु उपत्यकामा देव र मल्ल थरका राजाहरूले पालैपालो राज्य सञ्चालन गर्थे । देव (लिच्छवि राजाकै सन्तान) हरूको रैथाने घर बनेपा थियो, मल्लहरूको रैथाने घर भक्तपुर थियो । मल्ल र देवबीच पालैपालो राजा हुने नियम बनाइएको थियो । (यहाँ उल्लेख भएका ऐतिहासिक तथ्य र तिथि–मितिका विषयमा विद्वान् महेशराज पन्तको सहयोग लिइएको छ ।)
स्कुल पढ्दाताका लायकुबारे शिक्षकले सुनाएका कुरा र लेखकद्वय प्रधान तथा मानन्धरले आ–आफ्ना पुस्तकमा गरेका लायकु–वर्णनले केही अभिभूत र केही अन्योलग्रस्त भएको म अहिलेसम्म सोही स्थितिमा छु । अहिले विद्यार्थीहरू ‘हु’ गर्दै कराते सिकिरहने, अनेक सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रम भइरहने त्यो आँगनमा पहिले कस्तो दरबार थियो त ? मेरो कल्पनामा टेलिभिजनको श्यामश्वेत सिसाभित्र देखाइने गरेका हिन्दी टेलिशृंखला ‘महाभारत’ र ‘चन्द्रकान्ता’ का लागि बनाइएका दरबारहरूको चित्र आउँथ्यो । मेरो कल्पनाको क्यानभासमा मैले टेलिभिजनमा देखेको चित्रजस्तै थियो लायकु दरबार ।
करिब १० किलोमिटर पर पर्ने कुशादेवीबाट परिवारै बसाइँ सरेर आएको मसँग बनेपा सहरसँग जोडिएका अनगिन्ती सम्झना छन् । यहाँ चल्ने मोटर, चर्को स्वरमा कराउँदै बेतोड दौडिने आरएक्स बाइक देखेर सुरुसुरुमा त आत्तिएँ पनि । झमझम पानी परेको, चर्को घाम लागेको, कुहिरो लागेका दिनका सम्झना मस्तिष्कमा ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् बेलाबेला । मोटरको चर्को स्वर यहाँ पहिले सुनिन्नथ्यो पक्कै, आरएक्स मोटरबाइक पनि यहाँ सधैँ दौडिँदैनन् । घाम र कुहिरो त युगौंदेखि छ । समयका अनेक रूपलाई लायकु दरबारको यस मैदानले साक्षात्कार गरेको छ । मलाई भने लायकु दरबारको इतिहासमा पस्नुअघि त्यही दरबार परिसरमा कुनै बेला सञ्चालित एउटा पुस्तकालयको याद टड्कारोसँग आउँछ ।
कुहिरो लागेको दशकअघिको कुनै दिन होला, म लायकु दरबारअघिल्तिर भएर एउटा अन्तर्वार्ताका लागि गइरहेको थिएँ (दक्षुटोलस्थित गोपालदास वादे श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेस पार्टीका पुराना नेताको घरतिर) । लायकु दरबारभित्रको पश्चिम दक्षुढोका (नाला जाने मूल बाटोतिर) मा एउटा जीर्ण इमारत (पक्की घर) उभिइरहेको थियो । त्यो घरको माकुराको जालोमा लपेटिएको बन्द घडी भित्तामै टाँस्सिएको थियो । र, आफ्नै धुनमा मग्न परेवाले चुच्चोमा च्यापिल्याएका परालका लामा–छोटा टुक्रा बन्द घडीमाथि थुपारिरहेका थिए । त्यो दृश्यले मलाई समयको नदीमा तैरिरहेको आफ्नै विगततिर पुर्‍याउँछ ।
लायकु दरबारको ढोकैमा एउटा मान्छे उभिएको थियो । त्यसको नजिक पुग्दा सडकमै समय बिताउने मान्छेको शरीरबाट आउने कडा गन्ध महसुस भयो । दरबार अघिल्तिरको सानो पसलमा भर्खरै उसले एउटा याक चुरोट किनेको थियो । त्यो मान्छेले एकदम मैलो, टाँकले धर्म छोडिसकेको सेतो सर्ट (सर्ट यति मैलो थियो कि त्यो रङ सेतो होला भन्ने अनुमान मात्र हो) र थोत्रो प्यान्ट लगाएको थियो । गोडामा फाटेको चप्पल थियो । मैला औंलाले मुलायम तरिकाले उसले ‘याक’ च्यापेको थियो । धेरै दिनदेखि ननिदाएजस्ता आँखाले उसले मलाई हेर्‍यो, चिन्ने प्रयास पो गर्‍यो कि ? उसको र मेरो त्यो पहिलो र अप्रिय भेट भएको समयदेखि अहिलेसम्म मेरो जीउडालमा यति धेरै परिवर्तन आएको थियो, उसले मलाई चिन्न नसक्ने कुरामा म ढुक्क थिएँ । तर, त्यस अनुहारसँग वर्षौं पहिलेको जुन नराम्रो याद मेरो मानसमा गुजुल्टिएर रहेको छ, त्यसलाई भने म बिर्सिन सक्दैनथेँ ।
लायकु दरबारको त्यही भग्न घरमा त्यस क्षेत्रकै अग्रणी शिक्षक तथा बनेपाका मेयर रामभक्त कोख श्रेष्ठको पहलमा खोलिएको एउटा सानो पुस्तकालय थियो । मैले जीवनमा पहिलोपटक देखेको पुस्तकालय त्यही हो । विक्रमको २०५० सालतिर खुलेको त्यस पुस्तकालयको नाम थियो– बनेपा पुस्तकालय ।
म पहिलोपटक २०५३ सालमा गएको त्यो पुस्तकालय थियो– बडो अव्यवस्थित र फोहोर पनि । नमिलाई राखिएका किताब भुइँभरि छरिएका, च्यात्तिएका किताबका पाना, नैनसुतमा पोको पारिएका पत्रपत्रिकाजस्ता लाग्ने कागज किताब राखिने र्‍याकमाथि थुपारिएका थिए ।
बनेपा पुरानो बजारका ‘यसो किताब हेरौं न त’ भनेर वा ‘पढौं न’ भनेर वा ‘घुमौं न’ भनेर वा ‘कसले के गर्छ वा पढ्छ’ चियो गर्ने भनेर साना–पाका सबै उमेरका मानिसहरू त्यहाँ आइपुग्दथे । स्कुल छुट्टीपछि वा शनिबार म पनि पुस्तकालय पुग्थेँ, कहिले साथीसँग त कहिले एक्लै । मैले त्यही पुस्तकालयमा भुइँमा फालिएको, पाना च्यातिएको थोत्रो अवस्थामा पहिलोपटक देखेको हुँ– महाकवि देवकोटाको ‘मुनामदन’ र माधव घिमिरको ‘गौरी’ । साथै त्यहीँ पहिलोपटक पढेको हुँ ‘हेन्सल एन्ड ग्रेटल’ को चित्रकथा । हेन्सल र ग्रेटलको कथा मलाई कति धेरै रोचक लागेको थियो भने म त्यसकै यादमा त्यहाँ बारम्बार जान थालेको थिएँ । त्यस दिन पनि म भाइ शैलेन्द्रसँग पुस्तकालय पुगेको थिएँ ।
हान्स क्रिस्चियन एन्डरसनको कुनै परिकथाको पानामा निमग्न भएर अल्झिरहेको थिएँ, कसैको निकै कडा मुड्की मेरो कलिलो टाउकोमा बज्रियो । टाउकोमा टुटुल्को उठ्ने गरी हानिएको त्यस ‘खौं’ ले मलाई पूरै रन्थन्याएर छोडिदिएको थियो । म डरले अत्तालिएको थिएँ र हातको परिकथा भुइँमै हुत्याएर म त्यस मानिसको टाङमुनिबाट भाग्न खोजिरहेको थिएँ तर म भाग्न सकेको थिइँन । उसले मलाई उचालेको थियो, गालामा थप्पड हानेको थियो र भुइँमा पछारिदिएको थियो । म डाँको छोडेर रुन थालेपछि ऊ एक शब्द पनि नबोली पुस्तकालयबाट बाहिरिएको थियो । शारीरिक र मानसिक पीडाले थङ्थिलो भएको म पनि एक छिनपछि संज्ञाशून्यझैँ त्यहाँबाट निस्किएको थिएँ । अनाहकमा पिटाइ खाएको मैले आइन्दा त्यस पुस्तकालयमा कहिल्यै नजाने निर्णय गरेको थिएँ ।
वर्षौंपछि कुहिरोको बाक्लो पर्दाबाट चिहाउन खोजिरहेको बनेपा पुस्तकालयभन्दा बाहिरपट्टि मैला औंलाले ‘याक’ चुरोट च्यापेर उभिएको त्यस मानिसलाई अचानक देख्दा म एकपटक त झसंग भएँ । तर, तुरुन्तै म सहज भएँ र उसलाई ध्यानपूर्वक हेरेँ ।
त्यो मानिससँग मलाई सोध्न मन थियो– त्यो दिन तपाईंले मेरो टाउकोमा खौं किन हान्नुभएको थियो ? त्यस दिन आफूले जोडले खौं हानेको त्यो केटोलाई के उसले सम्झेला ?
मचाहिँ अहिले पनि त्यो अधबैंसे मानिसलाई आफ्ना मसिना औँलामा धुँवाइरहेको चुरोट मुलायम तरिकाले च्यापिरहेको देख्छु बेलाबेला । उसको खौं याद आएपछि शरीरमा पीडाजस्तो केही हुन्छ ।
मलाई मेरो बाल्यकालभरि त्रस्त बनाएको उसको अनुहार अहिले भने एकदम नै मामुली, कताकता टीठलाग्दो लाग्न थाल्यो । कुनै बेला मान्छेको टाउको खोजीखोजी खौं हान्न सक्ने बलियो मानिस अहिले कमजोर र निरीह बनेको छ । समय रहेछ बलियो । समय बलियो रहेछ पनि कसरी भन्नु र ? समय त एक कल्पित मापन मात्रै हो । बरु आयु हुँदो रहेछ समयको भनौं— मान्छे जन्मन्छ, तारुण्यमा बयली खेल्छ र प्रायः मक्किएको बूढो हाँगाबाट खस्छ । समय वा मानिस जन्मन्छन्, सामर्थ्यको त्रिकालमा विभाजित भएर अन्तिममा मर्छन् । कुनै बेलाको बलियो, सुन्दर र बडो रवाफका साथ उभिएको लायकु दरबार पनि त अहिलेको त्यो निरीह खौं–मानिसजस्तै अति दुःखी र निरीह छ । हिजो नजन्मेका मोटरका आवाज, बाइकको दौड आज मस्त जवानीमा छन्, ती पनि कुनै दिन मर्छन् । अनायासै नै मेरो ओठमा सायद बाङ्गो मुस्कानको एउटा धर्सो कोरियो ।
देशभरि लकडाउनको स्थिति कस्तो छ ? भारतसँग जोडिएका सीमा–नाकाहरूमा रोकिएका नेपाली नागरिकहरूले किन दुःख पाइरहेका छन् ? संसारभरि संक्रमितहरूको कुल संख्या कति भयो ? सरकार सम्भावित संकटसँग जुध्न सक्षम छ ? टेलिभिजन च्यानलहरूले यस्तै–यस्तै विषयमा समाचार र विचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरूमा कोरोनाविद्हरूको ‘बिगबिगी’ चलिरहेकै छ । म भने अनुहारमा मास्क र हातमा स्यानिटाइजर लगाएर उही पुरानो प्रिय पुस्तकालयतिर जान भनी निस्किएँ । लायकु पुग्दा थाहा भयो, पहिले पुस्तकालय भएको त्यो भवनमा अहिले व्यायामशाला खुलेको रहेछ । अब त्यहाँ पुस्तक, पत्रपत्रिकाको सट्टा गठिलो ज्यान बनाउने सरजाम थुपारिएका थिए ।
साँघुरिँदै गएको बनेपामा साना केटाकेटी खेल्ने, अधबैंसे र उमेर पाकेका मानिसले योग–ध्यान गर्ने अलि चाक्लो, फराकिलो जमिन कहीँ देख्न पाइन्छ भने त्यो लायकु दरबारको परिसरमा हो । बनेपा प्राधिकरण चोकैनेर यसको ठूलै कम्पाउन्ड छ । त्यो घेराभित्रको पुरानो लामो भवनमा क्योकुसिन कराते–डो, योग केन्द्रजस्ता केही संस्था छन् । कुनै बेला त्यहाँ घरेलु शिल्पकला कारखाना हुने गर्थ्यो, जहाँ महिला बुनकरहरूले कपडा बुनिरहेको देख्न सकिन्थ्यो । अहिले त्यो कपडा कारखाना पनि बन्द भइसकेको छ ।
अचेल लायकु दरबार पनि त कहाँ छ र ? दरबारको चिह्नस्वरूप पुरानो इँटाको गारोको अवशेष छ । दरबारको चौघेराभित्रको चौरको छतको रूपमा फलामको ठूलै ट्रस बनेको छ । सरकारी स्कुलको ४ तले भवन पनि यही कम्पाउन्डभित्र छ । लायकुको यो कम्पाउन्डभित्र घाँस उम्रिएको, लेउ लागेको पुरानो संरचना छ दरबारको, इतिहास बोकेर बाँचिरहेको । त्यस संरचनाको बनोट, विन्यासले भनिरहेका छन्– यही हो मध्यकालको बनेपामा शासन गर्ने राजा रण मल्ल र उनका अग्रज अनि पछिल्लो पुस्ताको दरबार । ‘लिच्छविकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, राणाकाल, सात सालको प्रजातन्त्र, पञ्चायत, छयालीस सालको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबै देखे–भोगेको छ, लायकु दरबारको यो भग्नावशेषले’, बनेपाकै लेखक मोहन दुवाल भन्छन् ।
बनेपामा पाइएका शिवदेव र अंशुवर्माको (अहिले संवत् फुटिसकेको) अभिलेखले यो क्षेत्र लिच्छविहरूको शासन–सीमाकै सहर थियो भन्ने बुझिन्छ । ‘बनेपा सहरको बीचमा सानो देवमन्दिरसँगै यस कुराको अभिलेख कुँदिएको ढुंगा छ । बनेपाको यस बस्तीको चाँगुनारायणसँग कुनै सम्बन्ध रहेको देखिन्छ (लिच्छविकालका अभिलेख, धनवज्र वज्राचार्य, पृष्ठ २४०) ।’
इतिहासकार प्रधानले लेखेका छन्, ‘भक्तपुरका राजा यक्ष मल्ल (विसं १४८५–१५३८ शासनकाल) को मृत्युपछि विसं १५३९ मा काठमान्डुजस्तै बनेपा पनि स्वतन्त्र राज्य बन्यो । र, यक्ष मल्लका साहिँला छोरा रण मल्ल स्वतन्त्र बनेपाका प्रथम राजा बने । रण मल्लको मृत्युपछि भक्तपुरका शासक सुवर्ण मल्लले बनेपालाई भक्तपुर राज्यमा गाभे । भक्तपुरका शासक रणजित मल्लको समयमा पनि बनेपाको महत्त्व उच्च थियो । गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले काठमान्डु उपत्यका जितिसकेपछि आफ्ना मीतबा भक्तपुरका राजा रणजित मल्ललाई बनेपाको ‘जागिर’ खाएर बस्न अनुरोध गरेका थिए । तर, रणजितको स्वाभिमानले त्यो अनुरोध स्वीकार गर्न दिएन । उनी पृथ्वीनारायणसँग अनुमति लिई काशीवास गर्न गए ।’
‘काठमान्डु उपत्यका तलाउका रूपमा छँदा बनेपा एक सानो राज्यका रूपमा थियो । बौद्ध आख्यानको थ्यासफूमा बनेपालाई धर्मपुर भनी उल्लेख गरिएको छ । धर्मपुरका राजा धनी थिए । राजा बस्ने भएकाले यहाँ राजदरबार अवश्य थियो । जयभीमदेव आदि प्राचीन मल्लकालका एकथरी राजवंशको मूल घर बनेपा थियो । उक्त राजवंश नेपालको इतिहासमा भ्वन्त अर्थात् बनेपाली भनी प्रसिद्ध थियो । लायकु दरबार मल्ल राजाहरूको ऐतिहासिक थलो हो (बनेपा सातगाउँ, मानन्धर, पृष्ठ ६१) ।’
इतिहास केलाउँदा बनेपामा जति शासक आए, तिनीहरूले लायकु दरबारबाटै शासन गरेका थिए भन्ने स्पष्ट हुन्छ । ‘भोंत’, ‘भोन्त’, ‘भ्वन्त’, ‘भोतदेश’, ‘बनियापुरी’, ‘बीलयापुरी’, ‘बनिकापुर’, ‘बन्दिकापुर’, ‘बणिकापुर’, ‘बणिकापुर महानगर’, ‘बनेपुर’, ‘बनिपा, ‘पनिपा’, ‘बनेपाग्राम’, ‘बनेपा’, ‘भुजुङ’ आदि अनेकौं नामले यस नगरलाई सम्बोधन गरिँदै आएको छ । आधुनिक कालमा नेपालमा आएका अंग्रेज सैनिक मिसनका कर्कपेट्रिकले बनेपुर, बनिपा वा पनिका भनी अशुद्ध उच्चारण गरेका थिए (प्रधान, पृष्ठ ४१) । जसरी उच्चारण गरिए पनि माथि उल्लिखित सबै शब्दले बनेपालाई नै जनाउँछन् ।
‘नेवारी भाषामा ‘बने’ शब्दले ‘व्यापार’ र ‘पा’ शब्दले ‘देश’ वा ‘बस्ती’ भन्ने बुझाउँछ । काठमान्डु उपत्यकाबाहिरका साँगा, नाला, धुलिखेल, चौकोट, खड्पु र पनौतीजस्ता सहरको बीचमा पूर्वी भेगको व्यापार–केन्द्र हुनाले यस सहरको नाम बनेपा रह्यो (स्थाननामकोश, कृष्णप्रकाश श्रेष्ठ, पृष्ठ २६४) ।’ कलिगत वर्ष ४१९७ मा राजा आनन्ददेवले काभ्रे जिल्लामा छरिएर रहेका स–साना ७ सहर (बनेपा, पनौती, नाला, धुलिखेल, खड्पु, चौकोट र साँगा) मिसाएर एउटै राज्य बनाएका थिए भनी ‘बनेपा सातगाउँ’ किताबमा उल्लेख छ (ज्ञानकाजी मानन्धर, पृष्ठ १) ।
लायकु दरबारबाट बनेपाको मध्यकाल चियाउन खोज्दा हाम्रासामु ‘भोन्तश्री’ आइपुग्छन् । गोपालराज वंशावलीमा ‘भोन्तश्री’ भनी उल्लेख गरिएको छ । ‘भो देश’ नामको प्रयोग सर्वप्रथम वि.सं. १८३६ मा भएको पाइएको छ । मध्यकालमा देखिएको ‘वणिकापुरी’ नामको उल्लेख विसं १४९१ को बनेपा दक्षुटोलको ढुंगेधाराको सूर्यमूर्ति अभिलेखमा छ (प्रधान, पृष्ठ ४३) ।
प्रधान लेख्छन्, ‘भोन्तश्री राजकुलको मूलघर नै बनेपा भएकाले यता उनीहरूको दरबार थियो ।’ उनका अनुसार, धेरै पुरानो दरबार हो– लायकु, जहाँ भोन्तश्री राजकुलको निवास थियो र यहाँबाटै प्रशासनिक कार्य हुन्थ्यो । यो दरबारलाई वसन्तपुर दरबार पनि भनिन्थ्यो । ‘लायकु दरबार पूर्वमा दक्षुटोल पुलबाटोको कलधारादेखि दक्षिणको बाटो, पश्चिममा दक्षु ढोका, उत्तरमा बजारको मूल बाटो र दक्षिणमा कोलाँ टोलको मूलबाटोसम्म विस्तारित थियो (प्रधान, पृष्ठ ६२) ।’
आफ्नो पुस्तक ‘बनेपाको ऐतिहासिक रूपरेखा’ तयार गर्ने सिलसिलामा प्राध्यापक प्रधानले २०३४ सालमा अन्तर्वार्ता गरेका बनेपाका ८५–९३ वर्षका बूढापाकाहरू (गणेशदास प्रधान, विकुलाल कर्माचार्य र मोहनलालखिङ मानन्धर) ले उनलाई नौतल्ले त्यो लायकु दरबारको एक तलाको अवशेष आफैंले देखेको र तीन तल्लासम्मको अवशेषबारे देख्नेहरूबाट सुनेको बताएका थिए । अन्तर्वार्ताको यो प्रसंगबारे उनले किताबमा पनि उल्लेख गरेका छन् ।
हाल पुरानो दरबारको झल्को दिने कलात्मक महादेव, गणेश र कलशको बुट्टा भएको ढोकाबाट भित्र प्रवेश गरेपछि पूर्वपट्टि देखिन्छ– सेतो रङले पोतिएको लायकु राजमञ्च । दक्षिण–पूर्वी कोणमा २०१८ सालमा निर्माण भएको शिक्षा सदन माध्यमिक विद्यालयको भवन छ । दक्षिणपट्टि छ– लायकु योग केन्द्र र नेपाल जुडोको कार्यालय । पुरानो दरबारका गारो र इँटाको भग्नावशेष भने अहिले पनि देख्न पाइन्छ ।
‘मैले देख्दा एक तलाको लायकु दरबार ढल्ला–ढल्लाझैं गरी उभिएको थियो । ०२२ सालतिर त्यही दरबार प्रांगणमा थियो– पुलिस चौकी । घरेलु शिल्पकलाको कारखाना पनि दरबारभित्रै थियो । पछि शिल्पकला बिक्री भण्डारले यही प्रांगणमा नयाँ भवन बनाएर काम गर्न थाल्यो,’ मोहन दुवाल सम्झन्छन् । लायकु दरबार ९० सालको भुइँचालोबाट भत्केको अनुमान दुवालको छ । अहिले दरबारको अवशेषको रूपमा मजबुत पुरानो गारो यथावत् छ, शिक्षा सदन स्कुललाई घेरेर बसेको । ‘शिक्षा सदन माविको भवनसँगै पहिले नै घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डारले दक्षिणपट्टि नयाँ भवन बनाएर दरबारको चारैतिर किल्लाहरू बनाइएको थियो र उत्तरमा पूर्ण किल्ला (क्वाथः) थियो (प्रधान, पृष्ठ ६३) ।’
पुराना कांग्रेस नेता गोपालदास वादे श्रेष्ठको मस्तिष्कमा पनि मोहन दुवालले देखेजस्तै दरबारको अस्तित्व छ, एक तलाको जीर्ण लायकु दरबार । ‘पछि संरक्षण नभएर त्यो त्यत्तिकै ढल्यो,’ गोपालदास भन्छन् ।
मेरो सहरले आफ्नो अनुहार फेरेको छ । प्रधानले किताबमा उल्लेख गरेको बनेपा स्वधाटोलको ‘मयजु फः दरबार’ र वकुटोलको ‘पुतली दरबार’ अहिले मिथका रूपमा मात्रै बाँकी छन् । स्वधाटोलमा अझै खेत खन्दा पुराना भवनका ठूला जग देखिन्छन् भन्ने किस्सा बाँकी नै छ । पूर्वमा पोखरी, पश्चिममा ढलँ छेँ, उत्तरमा काँथुगणेशको पोखरी र दक्षिणमा मूल बाटोसम्म पुतली दरबार विस्तारित थियो भन्छन् यहाँका बूढापाकाहरू । दरबारका पुराना केही अवशेष अझै पाइन्छ पनि भन्छन् ।
इतिहास, इमारत र स्थापत्य अब मिथक र किस्सामै बाँच्ने भए । पुराना पुस्तकालय, बाजे–बराजुका पसिनाले निर्मित नागबुट्टे ढुंगेधारा, पाटी, सहर र दरबारका आख्यान अब बनेपाका बूढा मानिसका मस्तिष्कका पत्रे चट्टान र पुराना पुस्तकालयका धूलो टाँस्सिएका किताबमा कतै जीवित छन् ।
एउटा सहरको यति लामो र गतिलो इतिहास बोकेको लायकु दरबारको संरक्षण पक्कै हुनुपर्ने थियो । ‘संरक्षण हुनुहुँदैन’ भन्ने मत सायदै कसैको होला । तर, संरक्षण गर्ने कसले ? मोहन दुवाल भन्छन्, ‘मैले धेरैपटक नगरपालिकाको मेयरसँग भनेँ, यही टोलको नेता मन्त्री भएका छन्, यसै मौकामा संरक्षणको लागि पहल गरौं न भनेँ, तर मेरो कुरा कसैले पनि सुनेनन् ।’ यही प्रांगणमा राखिएको ढ्वाङमा खसेको भोटले दुई नेता यहाँबाट मन्त्री भए । तर, उनीहरूलाई जागिर खाँदै फुर्सद भएन (सायद उनीहरू जागिर खानै वा जागिरका नाममा अरू केही ‘खान’ पो चुनाव लडेका थिए कि !) प्रधानले चर्चा गरेको बनेपाको प्राचीन लायकु दरबारको संरक्षण, संवर्द्धन र त्यसबारे अध्ययन गर्नका लागि मात्र होइन, दुवालले गरेको आग्रहमाथि सुनुवाइ गर्नुपर्ने कुराको खाँचो पनि आजका नेताहरूले देखेका छैनन् ।
लकडाउनको मेसो नहुँदो त म स्वयं पनि लायकु दरबारबारे यसरी घोत्लिँदैनथें कि ? दरबार र पुरानो समयको झल्को दिने सेता स्तम्भसहितको देवीदेउताको बुट्टा कुँदिएको ढोकाबाट लायकुको घेराभित्र चियाउँदा देखिन्छन्– लकडाउनकै बिदामा बसेका केटाकेटीहरू मस्त खेलिरहेका छन् । अनि, त्यहीँ छ– मानिसहरूको एउटा लामो लाइन । यो मानव–पंक्ति बनेपा नगरपालिकाको ८ नम्बर वडा समितिले दिने केही किलो राहत–चामलको लाइनमा उभिइरहेका श्रमिकहरूले बनेको छ । लायकु परिसरको वडा–कार्यालय भवनमा मानिसहरू भित्तामा टाँसिएको राहत लिस्टमा आफ्नो नाम खोजिरहेका छन् । जसको नाम भेटिन्छ उसको ओठमा एक पित्को मुस्कान नजानिँदो किसिमले देखापरेझैँ हुन्छ ।
कडा घाममा सुकेको लायकुभित्र छन्– केही रूख, चुपचाप ठडिएका, ती पनि घामले सुकेर हैरान छन् । जस्तो दरबारका पुरानो इँटाले बनेका प्राचीन समयको चिह्नसहितका गारोहरू शताब्दीऔंदेखि घामले सुकेर दिक्क छन् । लकडाउनमा राहतको लाइनमा बसिरहेका मानिस पनि दिक्क छन्, उद्धारकै प्रतीक्षामा बसेको लायकु दरबारजस्तै । उद्धार गर, उद्धार गर भन्ने आवाजभित्र समेत फगत एउटा उपदेशबाहेक केही छैन । सबै राम्रा काम अरूबाटै होऊन् भनेर पर्खिरहनेको शब्दकोशमा कि उपदेश छ, कि त गाली मात्र शेष छ ।
(शनिबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)
प्रकाशित : भाद्र १२, २०७७ १९:१६
छन्दका दुर्लभ नक्षत्र
यो धरतीमा नेपालीभाषी र कविताको महिमा रहुन्जेल उनका मन्त्ररुपी कविताहरु पाठकको पठन आकाशमा टिमटिमाइ रहनेछन् र तिनले कहिले रूवाउने छन्, कहिले आनन्दको वर्षा गराउनेछन्, जिन्दगीको अर्थ पत्ता लगाउने नयाँ सोचको किरण छरिरहनेछन् ।
भाद्र ३, २०७७ दीपक सापकोटा
कविवर माधव घिमिरेले लेखेका थिए– फूलको थुँगा बहेर गयो गंगाको पानीमा, कहिले भेट होला है राजै यो जिन्दगानीमा ।
पहाडमा फुलेका ‘वनफूल’ हुन्– माधव घिमिरे, जो आफ्नै कविताका पंक्तिझैं बहेर गएका छन्, उनैको कविताजस्तै– अब यो जिन्दगानीमा उनीसँगको भौतिक भेट सम्भव छैन । भर्खरै बगिगएका यी ‘फूलका थुँगा’ आफ्नै कविता र कविताका दर्शनबाट नेपाली कविताका कहिल्यै नओइलाउने फूल बनेका छन् ।
प्रकृतिप्रेमी लेखक एवं वैज्ञानिक तीर्थबहादुर श्रेष्ठले २०३६ सालदेखि २०४६ सालसम्म घिमिरेसँगै काम गरे, प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा । भूपी शेरचन, विजयबहादुर मल्ल, लैनसिंह वाङ्देल, अमर चित्रकार, माधव घिमिरे, तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, नयराज पन्त, बालकृष्ण पोखरेलको टिम थियो । ‘आजसम्म त्यो टिममा जिउँदा हामी दुई थियौं । अब उहाँ गएपछि म एक्लो भएको छु । मलाई एकदमै करेन्ट लागेजस्तो भएको छ,’ श्रेष्ठले भने । उनको बुझाइमा आफू बाँचेको परिवेशभन्दा बाहिरको नसा समातेर कविता लेख्ने कवि थिए घिमिरे । उनको विचारमा आफ्नो जिन्दगीको अर्बिट (ग्रहपथ) भन्दा बाहिर जाने द्वार हो कविता । अरूको जीवन देख्न कवि पनि अरूको अर्बिटमा प्रवेश गर्नु जरुरी हुन्छ । र, अरूको अर्बिटमा प्रवेश गर्न सक्ने कवि हुन् घिमिरे ।
घिमिरेका कविताले आफ्नै स्तम्भ बनाएका छन्– अरूका कवितालाई होच्याउन होइन, सँगसँगै हातेमालो गरेर नेपाली कविताको गरिमा कायम राख्न । उनले जानेर गरेका थिए भन्नु अतिशयोक्ति होला तर उनको काव्यपथले त्यही मार्ग लियो जसलाई नेपाली वाङ्मयले सधैं गर्वका साथ लिनुपर्ने हुन्छ । र, भन्न सकिन्छ– नेपाली कवितालाई अग्ल्याउन उनले गरेको कर्म र उनको कविताको स्कुलको संस्थापक उनै हुन् । काव्यको मर्म बुझ्नेहरू भन्छन्– उनका कविता उनकै गाउँ लमजुङको पहाडी मूलबाट रसाएका झरनाका कञ्चन पानी हुन् । बहुचर्चित ‘गौरी’ र माधव घिमिरे– दुई पदार्थलाई नेपाली कविताका पारखीले मस्तिष्कमा यसरी हुलेका छन् कि पारखीको मस्तिष्कबाट कवि र कविता कसैगरी बाहिर निस्कँदैनन् ।
‘ऋतम्भरा’ महाकाव्यमा साधनारत घिमिरे पछिल्ला केही वर्षमा अपवादबाहेकका साहित्य महोत्सव वा सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएनन् । उनलाई भेट्ने रुचि भएकाहरू उनको घरै पुग्थे । घरैमा गएर सम्मान दिन्थे, लिन्थे । उनको घरमा दिनहुँजसो सेल्फी खिच्ने, अन्तर्वार्ता गर्ने र फोटो सेसन गर्नेहरूको ताँती लाग्थ्यो । कहिल्यै झर्को नमानी उनी काँपेको स्वरमा काँपेकै हात हल्लाउँदै बोलिरहन्थे ।
घिमिरेको काव्य–संसार धेरै नेपालीको हृदयमा छ । घिमिरे नेपाली कविताका ‘टावरिङ पर्सन’ मध्ये एक बनिसकेका छन् । कविता–लेखनमा अब घिमिरेझैं ‘पर्सनालिटी’ बनाउने सपना कसैको हुन सक्छ । तर, त्यसको जिम्मा समयले लिन्छ । हुन पनि उचो स्थानमा पुग्न चाहनेहरू पुग्लान् तर काव्यमर्मरहित भएर ओर्लिनुपर्ने सम्भावना पनि प्रबल रहन्छ ।
कवि वैरागी काइँलाले आमजनताले आफ्नो कविका रूपमा घिमिरेलाई स्वीकार गरिसकेको बताए । ‘उहाँलाई सरकारले राष्ट्रकवि बनायो तर सबै साहित्यकार, साहित्यप्रेमी र नेपालीका प्रिय कवि हुनुभयो,’ उनले भने, ‘आफ्नो जीवनकालमै मान–सम्मान र श्रद्धा पाउने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो । सरलताभित्र गहनता भएको साहित्य लेखेर समृद्ध बनाउने कवि पनि उहाँ नै हो ।’ काइँलाका अनुसार समकालीन स्रष्टाका भन्दा कम लेखेका भए पनि नेपाली जनजीवन, नेपालीपनले भरिएका उनका काव्यरचना वा गीतिनाटक, फुटकर कविताका साथै प्रेमका कारुणिक कविता तथा युद्ध र युद्धजनित–विध्वंशले ध्वस्त हुन लागेको मानवतामाथि दार्शनिक ऋषिकोझैं गहिरो चिन्तन र मननले लेखिएका काव्यरचनाले उनलाई स्थान उच्च स्थान दिएको छ ।
पटक–पटक बिरामी हुँदा पनि, हात थरथर काँपिरहे पनि घिमिरेको कलम कामेको थिएन । काठमाडौं लैनचौरस्थित निवासमा परिवारसँगै बसेर उनी निरन्तर साहित्य साधनामा थिए । उनले आफ्ना कवितामा अनेक ऐतिहासिक मानिसमाथि लेखेका छन् । समीक्षकहरू त्यसलाई उनको आविष्कारझैं ठान्छन् । ‘राष्ट्रनिर्माता’ मा पृथ्वीनारायण शाह, ‘राजेश्वरी’ मा नेवार सभ्यताकी राजेश्वरी, ‘मालती मंगले’ मा कमारी मालती र कमारो मंगलेलाई स्केच गरेका छन् उनले । मालती र मंगलेको अनुहारमा हामी कुनै बेलाको समयको प्रतिबिम्ब देख्न सक्छौं र अहिले पनि त्यसको बाछिटा महसुस गर्न सक्छौं ।
प्रकृति र जीवनमाथि उनले गरेको काव्य–सिर्जनाले भन्छ– शब्द र सौन्दर्यलाई सुन्दर बनाउनु उनको एक मात्र अभिष्ट हो । उनका काव्यिक बिम्बमा सौन्दर्यको ताजा सास भेटिन्छ ।
कवि घिमिरेले लेखे, ‘राष्ट्रको निर्माण एक अनन्त प्रक्रिया हो । आज यो भू–प्रदेशको विस्तारमा होइन, राष्ट्रिय आत्माको परिष्कारमा हुन्छ । राष्ट्रजन जीवित हुन्जेलसम्म यो प्रक्रिया कहिल्यै सकिँदैन ।’ सही हो, घिमिरेले आफ्ना कवितामा राष्ट्रनिर्माणका पक्षमा निकै लेखे तर मानवीय संवेदनासहित ‘गौरी’ शोककाव्यमा वियोग र विरह पनि लेखे ।
‘गौरी’ मा उनले लेखेका छन्, ‘व्यक्तिगत शोक, यसले अरूलाई पनि काम दिन्छ, म भन्न सक्दिनँ । आफ्ना आँसुलाई लिएर बजारमा म के मोल गरूँ ? तैपनि मानिसहरू भन्छन्– आँसुले हृदय धुन्छ रे । मैले पनि अरूको निम्ति यसै सम्झेको छु ।’
घिमिरेका रचना, कौशल, विराट् स्टाइलले पाठकलाई जकडिइहाल्छन् र कविताका पारखी उनका फ्यान बन्छन् । उनीप्रति जुन श्रद्धा पाठकको हुन्छ, त्यो कुनै अव्यावहारिक बोली होइन । त्यो त कैयौं पाठकको स्वच्छ मस्तिष्कबाट बाहिर निस्केको पूजा हो ।
समालोचक नेत्र एटम भन्छन्, ‘माधव घिमिरेका कविता घोक्नु पर्दैन, तिनका हरफ आफैं हृदयबाट कण्ठमा आउन हतारिन्छन् । असल कविता मञ्चमा कसैलाई धारेहात लगाउँदै पढ्नु पनि पर्दैन, आफैं तिनले पाठकका गुनगुनमा स्थान पाउँछन् ।’ कवितालाई लिएर कविवर घिमिरे अति स्पष्ट थिए । असल साहित्य के हो वा खराब साहित्य के हो भन्नेमा घिमिरेमा अस्पष्टता र अलमल थिएन । उनी बाँचेको समय भयानक अशान्त । अनेकबीच उनले लेखिरहे र हृदयस्पर्शी लेखे । घिमिरेलाई सम्झँदा आफ्ना सम्झनाहरू पनि आनन्दित हुन्छन् भन्छन्– कवि विप्लव प्रतीक । उनले भने, ‘माधव घिमिरे यस मुलुकका मात्रै होइनन्, यस ब्रह्माण्डकै कवि हुन् । भन्न मन लाग्छ उनलाई– ब्रह्माण्ड कवि । तर, जब जब कविवर भन्छु उनलाई सम्झिँदा लाग्छ, उनी करिब छन् मेरै वरिपरि । आज लागिरहेछ मैले समाउन सक्ने छन्दको एउटा मियो हरायो ।’
कवि मनु मञ्जिललाई कविवर घिमिरेको जीवनको उमंग उनको अनुहारमै देख्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । ‘हृदयको त्यो उमंग उनले लेखेका गीतमा, कवितामा छरिएर नै तिनले जगत्लाई कविको वरिपरि घुमाउने क्षमता राख्छन् । उनले कविता लेखेकै ८५ वर्ष नाघ्यो,’ मनुले भने, ‘यति समयमा त यौटा सानु यात्री कमिलाले पनि सयवटा पहाड नाघिसक्छ । यौटा उत्कृष्ट कविको साढे आठ दशकको काव्यिक यात्रामा भावनाका कति दुर्गम उचाइहरूमा उनी पुगे होलान्, हामी अवाक् भएर अन्दाज मात्र गर्न सक्छौं ।’
आफ्ना ‘प्रिय’ कविहरूबारे बोल्दा राष्ट्रकविले मसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘लेखनाथको कविता पढेर कविता लेख्न सिकेको हुँ ।’ उनले आफ्नो निबन्धसंग्रहमा लेखेका छन्, ‘जो बोल्दाबोल्दै वार्ता भैसकेको छ, जो सोच्तासोच्तै दर्शन भैसकेको छ, त्यो कविता हैन । ...एकै भाषा सबैको भाषा हुन्छ, त्यही काव्यमा बोलिन्छ, एकै मर्म सबैको मर्म हुन्छ, त्यही काव्यमा खोलिन्छ । कवि आफ्ना मुरलीमा यही भाषा सोच्छ, आफ्नो मधुमती भूमिकामा यही मर्मको मधुकोश रच्छ ।’
समीक्षक/समालोचकले उनलाई देवकोटा र पौड्यालकै स्तरको कवि मानेका छन् । ‘फुटकर समीक्षा’ मा ईश्वर बरालले लेखेका छन्, ‘लेखनाथ पौड्याल जुन ठाउँमा पुगेर अडिए, त्यहीं ठाउँमा घिमिरे अघि बढे । पौड्यालको शैली, भाव तथा व्याख्याले रूपायित भएर तथा प्रकृतिका कवि देवकोटाको सारा प्रभावले भिजेर पनि घिमिरे फरक भए ।’
‘गाउँछ गीत नेपाली, ज्योतिको पङ्ख उचाली...’ गीत प्राथमिक कक्षाको पाठ्यपुस्तकमै थियो । यही गीतले नै हो त्यसबेलादेखिका अधिकांश नेपालीलाई बालककालबाटै घिमिरेको कवितासँग परिचित हुन पाउने अवसर जुरेको । आख्यानकार नारायण ढकालले पनि ‘गाउँछ गीत नेपाली’ मार्फत प्राथमिक कक्षाको पाठ्यपुस्तकबाटै उनलाई पढेका हुन् । ‘हामीलाई हाम्रा नेपाली विषयका गुरुले त्यो कविता कण्ठ पार्न लगाएका थिए’, ढकालले सम्झिए ।
कवि सीमा आभासको विचारमा कविको आवाज पाठकको ढुकढुकीमा कविताको लय बनेर सुनियो भने ऊ खास कवि हो । ‘एउटा कविका कवितामा उसको देश देखिनुपर्छ । सौन्दर्ययुक्त आभाले सिँगारिएको देशको नक्सा बोकेर उनका कविता ओर्लन्छन् । माधव घिमिरे महसुर कवि हुन्, जसलाई नेपाली काव्यिक आकाशमा चन्द्रसूर्य अंकित झन्डा समाएर श्रद्धाले गाउन सकिन्छ,’ सीमाले भनिन्, ‘जब एउटा नेपाली राष्ट्रिय झन्डा बोकेर उभिन्छ, उसको ढुकढुकीमा आफसेआफ उनको गीत गुन्जिन थाल्छ ।’
नेपाली कवितालाई एउटा मोड दिएका थिए घिमिरेले । ‘तुलनात्मक रूपमा कृतिको स्थान कहा हुन्छ भन्ने त समालोचकहरूले निर्धारण गर्ने हुन् । तथापि पाठकले लगाएको मूल्यले पनि ठूलै ठाउँ पाउँछ,’ काइँलाले भने, ‘मैले त घिमिरेको गौरी र अश्वत्थामालाई औधि मन पराएको छु ।’ काइँलाको विचारमा मन पर्नु पनि राम्रो वा माथिल्लो उच्चस्तरको ठानिएको हो । भने, ‘चीजबीज किन्दा राम्रो लागेर महँगो मूल्य हालेजस्तो ठान्ने हो भने ती सिर्जना वा कृतिहरू मेरा लागि धेरै राम्रा अथवा महत्त्वका हुन् ।’ शाही शासनमा ‘राष्ट्रकवि’ पदवी पाएपछि उनीमाथि आलोचना पनि बर्सिए । तर आलोचनाकै केन्द्रमा उनका कविता र व्यक्तित्वमाथि उठेको हो । काइँलाले थपे, ‘लोकप्रिय तथा गहन काव्य–रचनाकारका रूपमा नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा लागिरहनु घिमिरेको योगदान हो । निकृष्ट तवरले गरिने आलोचनाको अर्थ छैन ।’
छन्दमा उत्कृष्ट कविता लेख्ने घिमिरे छन्द र लयको दृष्टिकोणबाट नेपाली इतिहासकै अन्तिम विराट् कवि हुन् । तर यो धरतीमा नेपालीभाषी रहुन्जेल र कविताको महिमा रहुन्जेल उनका मन्त्ररूपी कविताहरू पाठकको पठन–आकाशमा टिमटिमाइरहनेछन् र तिनले कहिले रुवाउनेछन्, कहिले आनन्दको वर्षा गराउनेछन्, जिन्दगीको अर्थ पत्ता लगाउने नयाँ सोचको किरण छरिरहनेछन् ।
उनी गए तर उनी रहिरहनेछन्, उनका कविता त्यसको साक्षीस्वरूप रहिरहनेछन् ।
प्रकाशित : भाद्र ३, २०७७ ०८:४७
बेयुल : एक कथास्था
चन्द्रमान मास्के र चन्द्रशमशेर राणा
गुरुमार्पाको टुँडिखेल कथा
मल्ल के. सुन्दर